Gurmadka Abaarta ee Talyaaniga
Rome - bishii marso, irbadda 11 20 14: 41
Madaxa saxaafadda 140.691.674 xiriiriye sanadka 2019
Rome - Talaado, 11 Agoosto 2020 14: 41
Home \_ NEWS ' \_ Gurmadka Abaarta ee Talyaaniga
Jawaabta degdegga ah ee Talyaaniga ayaa noqonaya arrin halis ah, Dowladduna waxay u socotaa daboolka si taxadar leh u kormeerta horumarinta xaaladda. Wareeg kasta oo wabiga ah waxaa jiri doona ilaaliye. Goob joogta ah oo joogto ah ayaa laga sameeyay heer qaran, kaas oo dhammaan wasaaradaha ay khuseyso, gobollada iyo maamulka basaska tixraacayaan. Tani waxay sidoo kale ka dhigtay suurtogalnimada in la xakameeyo qulqulka, maareynta sii deynta ka soo baxa qulqulka si loo hubiyo in wabiyada ugu yari ay u damaanad qaadayaan nidaamka deegaanka. Gobolka Liguria iyo gobolka Emilia Romagna ayaa saxiixay heshiis ah in ay sii daayaan 4.5 malaayiin mitir oo mitir oo biyo ah oo laga soo galiyay biyaha Brugnano una gudbaan webiga Trebbia. Xaalad degdeg ah ayaa lagu dhawaaqay aagga Parma iyo Piacenza. Dhinaca waxqabadka qaabdhismeedka, Wasiirka Arrimaha Gudaha wuxuu noogu soo gudbin doonaa: "Waxaan ka shaqaynaynaa sidii wax looga qaban lahaa qorshaha Qaran ee la qabsiga isbedelka cimilada, taas oo dhamaysay nidaamka wadatashiga dadweynaha waxayna diyaar u noqon doontaa dhamaadka sanadka. Maalmahan soo socda waxaan jeclaan lahaa in aan qeexo xirmooyinka ugu horreeya ee nidaamyada nidaamka lagu daro qandaraas lagu saxiixayo gobollada ". "Ugu horreyntii waxa uu sharxayaa qiyaasaha - kor u kaca awoodda kaydka hadda jira iyo ka dibna horumarinta hareeraha biyaha ee nidaamyada laydhka firfircoonida, taas oo ah in la yiraahdo kaydadka waraabka waraabinta ee webiyaasha ee waqtiyada socodka sare, iyo in la isticmaalo xagaaga ama marka loo baahdo. Waxaan sidoo kale ka fakarayaa isku dhufashada waraaqaha waraabka waraabka oo ay ku dhistaan ​​kuwo cusub, laakiin sidoo kale isticmaalaya macdanaha hore. Ka dibna waxaan isku dayi doonaa in aan soo jeedinno tallaabooyinka beeraha, si ay u riixdo naqshadeynta hababka waraabinta iyo sidoo kale in la qiimeeyo isticmaalka dalagyada u adkaysta isbedelka cimilada.
Channel PRP | NEWS ', dhaqaalaha | 24 Juun 2017 13: 26
Tallaalada, ururrada hooyadu waxay doonayaan inay caddeeyaan
Zaccagnini, Lorenzin wuxuu ka faa'iidaystaa geerida carruurta
KALA-QAADAY ISKUULKA KOOXAHA ISKUULKA
waxaan kuu baahannahay, samee deeq yar
Qoraalada sharciga iyo asturnaanta
PRP Channel 2017- 2020 - Wargeys ayaa ka diiwaan gashan maxkamada Velletri (Rome) no. 09 ee 21 Luulyo 2017 iyo ROC oo leh maya. 30281 ee 27 Sebtember 2017. Sawirada iyo fiidiyowyada lagu faafiyey mareegta PRP waxaa laga helaa qaabka "il furan". Xadgudubyada la helay, waxaan kaa codsaneynaa inaad ugu soo sheegto - info@prpchannel.com - si looga saaro isla mar ahaantaana. Xiriirada: redazione@prpchannel.com - commerciale@prpchannel.com - unug. 3484569339
Waxaan u isticmaali karnaa cookies si loo hubiyo in aad leedahay waayo-aragnimo fiican ee boggayaga. Haddii aad sii wado isticmaalka PRP Channel waxaad ogolaatay siyaasadda cookie. Waan ku soo dhaweynaynaa. Waxaan u isticmaali karnaa cookies si loo hubiyo in aad leedahay waayo-aragnimo fiican ee boggayaga. Haddii aad sii wado isticmaalka PRP Channel, waxaad ku raacsan tahay siyaasadda cookies. Waan ku soo dhaweynaynaa.OkAkhri wax dheeraad ah